कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन के गर्दैछ नेपालले ? – सुनाखरी न्युज
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी बनाउन के गर्दैछ नेपालले ?
Posted on: December 12, 2020 - 7:46 am
कोभिड खोप अभियान सुरु भएपछि नियमित खोप कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहुने गरी सञ्चालन गर्न विशेष तयारी आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । त्यसका लागि ‘कोल्ड चेन’ प्रणालीलाई बलियो बनाउन सरकारले खासै तयारी गरेको छैन । खोप बनेपछि त्यसलाई आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन एकै पटक अभियान चलाए मुलुकमा भएको संरचना अपुग हुन सक्ने देखिएको छ ।
एकै पटक ठूलो मात्रामा खोप आयो भने भण्डारण गर्न समस्या रहेको औंल्याउँदै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘एक महिनाभित्रै दुई मात्रा दिनुपर्ने कोभिडको खोप करोड मात्रा चाहियो भने हामी राख्नै सक्दैनौं । हामीसँग भण्डारण क्षमता नै छैन ।’
खोपसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले मुलुकले २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्ने कोभिडको खोप धान्न सकिने बताउँदै आएका छन् । कोभिडका लागि तयार गरी राखिएका केही ‘एम आरएनए’ खोप माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेड वा माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेडमा भण्डारण गर्नुपर्ने देखिएको छ । शून्यभन्दा ७० डिग्री सेल्सियस तल ९माइनस ९४ डिग्री फरेनहाइट० को तापक्रम आवश्यक भएको कोभिड खोपका लागि कोल्ड चेन कायम राख्नु चुनौती छ ।